Budada Raw Lorcaserin (616202-92-7) Soosaarayaasha - Phcoker Chemical
Budada Raw Lorcaserin waxay ka tirsan tahay nooc daroogo ah oo loo yaqaan 'serotonin receptor agonists'.Waxay ku shaqeysaa iyadoo la kordhinayo dareenka buuxa si that ..
Capacity: 1480kg / bishii
Budada Raw Lorcaserin (616202-92-7) video
Budada Raw Lorcaserin (616202-92-7) Sharaxaad
Raw Lorcaserin budada ayaa leh daawada loo yaqaanno serotonin receptor agonists.It wuxuu ka shaqeeyaa dareenka sii kordhaya ee buuxa si cunno yar loo cuno. Budada Lorercaserin waxaa loo isticmaalaa jimicsi dhakhtar ah oo la ansixiyey, isbedelka dabeecadda, iyo barnaamijka dietinta dhimirka inay kaa caawiso inaad lumiso miisaanka. Waxaa isticmaala dadka cayilan, sida kuwa ciriiriga ah ama leh dhibaatooyin caafimaad oo culus. Miisaanka oo laga yareeyo oo la joojiyo waxay yareyn kartaa khataraha caafimaad ee badan ee ku dhacaya cayilka, oo ay ku jiraan cudurka wadnaha, sonkorowga, cadaadiska dhiigga oo sareeya iyo nolol gaaban.
Budada Raw Lorcaserin waa xulasho agonist ah 5-HT2C, iyo baaritaanka fitamiinada ee daawada waxay muujisay xulasho macquul ah 5-HT2C bartilmaameedyada kale ee la xiriira. 5-HT2C soo dhaweeyayaashu waxay ku yaalliin inta badan maskaxda, waxaana laga heli karaa choroid plexus, kiliyaha, hippocampus, cerebellum, amygdala, thalamus, iyo hypothalamus. Dhaqdhaqaaqa 5-HT2C qaboojiyeyaasha ee hypothalamus ayaa loo maleynayaa inay dhaqaajineyso wax soo saarka proopiomelanocortin (POMC) sidaas darteedna kor loogu qaado miisaanka luminta iyada oo loo marayo dhereg. Daraasadaha caafimaadka waxay muujinayaan in daroogadu yareyn karto miisaanka buurnida iyo bukaannada culeyska badan, waxay hagaajin kartaa cabirrada dheef-shiid kiimikaadka ee la xiriira buurnida, waana la dulqaadan karaa. Ku xirnaanta budada Raw Lorcaserin ee 5-HT2c 100 jeer ka sarreysa 5-HT2B (khatarta cudurada wadnaha ee wadnaha), waxay leedahay badbaado wanaagsan, waa dawadii ugu horreysay ee la ansaxiyo ee miisaanka luminta ee FDA ka dib 1999. Sanad gudahood daaweynta budada Raw Lorcaserin, celceliska miisaanka oo yaraada wuxuu u dhexeeyaa 3 ilaa 3.7 boqolkiiba.
Root Lorcaserin budada (616202-92-7) Sooc
Product Name Root Lorcaserin budada
Magaca Kiimikada Raw Lorcaserin powder;(R)-8-Chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine
Fasalka Daroogada daacadnimada serotonin
Molecular Wsideed 195.69
Fdib u soo celinta Psaliid Xog lama hayo
Biological Life-Life Nolosha badhkeed ayaa ah qiyaasta saacadaha 11.
milmi Xakamaynta biyaha ayaa ka weyn 400 mg / mL.
kaydinta Temperature -20 ℃ barafeeyaha
Application Wixii daaweynta buurnaanta, sida ku-meel-gaadhka ah ee cunto-yare yareeyo iyo kor u kaca dhaqdhaqaaqa jirka.